Nametraka fepetra amin’ny OMS ny filoha Rajoelina: «Tazonina ho tsiambaratelo ireo singa mandrafitra ny tambavy CVO» | NewsMada
Nametraka fepetra amin’ny OMS ny filoha Rajoelina: «Tazonina ho tsiambaratelo ireo singa mandrafitra ny tambavy CVO»
Hiaka-tsehatra tanteraka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny tambavy malagasy ary anisan’ny hoenti-manasitrana izao tontolo izao. « Mametraka fepetra izahay ny amin’ny hanaovana fifanarahana mazava hitazomana ho tsiambaratelo ireo zavamaniry sy ny singa rehetra mandrafitra ny tambavy CVO », hoy ny filoha Rajoelina Andry, raha nifampiresaka tamin’ny tale jeneralin’ny OMS, ny Dr Tedros, afakomaly alarobia 20 mey. Nanadihady sy nanontany ny filoha Rajoelina momba ny tambavy CVO ity lehiben’ny OMS ity ka nanambaran’ny filoha fa tena mahomby amin’ny fitsaboana sy ny fiarovana ny valanaretina Covid-19 io tambavy io. « Porofon’izany ny fahamaroan’ireo marary Malagasy sitrana », hoy izy.
Tsindrona nanaovana andrana
Notsiahivin’ny filoha fa voka-pikarohan’ny mpikaroka sy manampahaizana malagasy, nalaina avy amin’ny fampiasana ny artemisia sy ravinkazo hafa misy eto amintsika, io tambavy io. « Misy ireo kambam-panafody roa miendrika tsindrona, hitan’ny mpikaroka malagasy ary iaraha-miasa amin’ny manampahaizana mpikaroka avy aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy avy any Etazonia, hoentina mitsabo ny valanaretina Covid-19 ary efa nanaovana andrana ara-pahasalamana nandritra ny iray volana teo », hoy ihany izy.
Ho lasa fanafody manaraka fenitra ny CVO
Haroso ho isan’ireo fanafody hanaovana andram-pitiliana ara-pahasalamana, ao anatin’ny tetikasa « Solidarity Trial », ataon’ny OMS, ny tambavy CVO sy ireto kambam-panafody roa ireo, araka ny fangatahan’io tale jeneralin’ity rafitra ara-pahasalamana manarena-tany ity. Naneho fahavononana ny hanampy sy ho mpiara-miombona antoka amin’i Madagasikara ny OMS amin’ny fanatsarana ireto vokatra ireto hampahomby izany andrana izany ka hahatonga ny tambavy CVO ho fanafody manaraka ny fenitra ara-tsiantifika sy eken’izao tontolo izao. « Hanampy anareo mandritra ny dingana rehetra amin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity izahay amin’ny alalan’ny vaomiera misahana ny fitsaboana nentim-paharazana eo anivon’ny OMS », hoy ny Dr Tedros. Nambaran’ny filoha Rajoelina fa miatrika fahavalo iraisana isika ka vonona i Madagasikara handray anjara feno hanavotana ny vahoaka sy ny firenena namana.